फेरिँदै कान्दाको मुहार ! | चितवन पोष्ट दैनिक
फेरिँदै कान्दाको मुहार !
२०७० चैत्र २, आईतवार ०२:२० गते
कान्दा (लोथर) । घटना २०६७ जेठ १४ गतेको हो । जुन दिन विषालु च्याउ खानाले एकै परिवारको ८ जनाको ज्यान गएको थियो । ९ महिनाको एक बालकमात्र यस घटनामा बाँच्न सकेका थिए । उनी अहिले भरतपुरमा रहेको एसओएस स्कुलको संरक्षणमा छन् ।
यसै घटनाले गर्दा कान्दा पछिल्लो समय सवैको सहयोग स्थल बनेको छ । यस ठाउँमा पुग्न पूर्वपश्चिम राजमार्गको भण्डारा बजारबाट १० घण्टा उकालो बाटो पैदल हिँड्नुपर्छ । ग्रामीण सडक हात्तीढापसम्म पुगेपनि यस स्थानबाट झण्डै ५ घण्टाको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ कान्दा पुग्न ।
पहाडी गाविस लोथरमा पर्ने विकट ठाउँमा रहेको कान्दा गाउँ अहिले परिवर्तनको संघारमा छ । कान्दा गाउँका स्थानीय चेपाङ र अन्य आदिवासी समुदायको विकासको लागि विभिन्न आत्मनिर्भर र विकासका कामहरु भइरहेका छन् ।
नौलो मान्छे देख्ने बित्तिकै घरभित्र लुक्नेहरु बाहिर देखिन थालेका छन् । आङ ढाक्न एक सरो लुगा नहुनेहरु लुगा लगाएर बस्न थालेका छन् । भोकभोकै दिनरात बिताउनेहरु आफ्नै आम्दानीमा रमाउन थालेका छन् ।
मितेरी फाउन्डेसन नामक संस्थाको सक्रियतामा कान्दाबासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान जारी छ । सुरूमा लत्ताकपडा वितरण, स्वास्थ्य शिविरजस्ता कार्यक्रमबाट अघि बढेको कान्दा रूपान्तरण अभियान अहिले सन् १९५० को दशकमा श्रीलंकामा एरियारत्नेले चलाएको सर्वोदय श्रमदान अभियानसँग मिल्दो–जुल्दो भएको छ ।
जहाँ विकासका गुरू मानिने एरियारत्नेले मानिसहरुबीचको आपसी स्वश्रमदानबाट गाउँको विकास सम्भव गराएका थिए । कान्दाबासीको आत्मनिर्भरताका लागि गाउँमा स्याउ रोपिएको छ । झण्डै ३०० बढी स्याउका बोटले नयाँ पालुवा फेरिसकेका छन् । त्यस्तै, त्यस स्थानको गरिवी हटाउनका लागि कृषि र पशुमा थप नयाँ अभियान जारी छ । कृषि रूपान्तरणका लागि मकै र तरकारीका उन्नत जातका बीउहरु लगाइएको मितेरी फाउण्डेसनका अध्यक्ष एकल सिलवालले बताए ।
त्यस्तै, पशुपालनबाट लाभान्वित हुनका लागि ‘जमुनापारी’ नामको उन्नत जातको ६ वटा बोका र उन्नत जातकै कुखुरा गाउँमा पाल्न थालिएको छ । स्थानीय जातका खसी बोकाभन्दा उन्नत जातबाट छोटो समयमै धेरै फाइदा हुने भएपछि गाउँलेहरु यसतर्फ उन्मूख भएको स्थानीय अगुवा सीताबहादुर चेपाङले बताए ।
कान्दा ९ र कोराक ४ सेवा क्षेत्र बनाएर अघि बढेको मितेरी फाउण्डेसनको कान्दा रूपान्तरण अभियानअन्तर्गत केही महिना अघिमात्रै ५० घरमा सोलार जडान गरिएको छ । अँध्यारोमा जीवन काटिरहेका कान्दा र कोराकबासीका लागि सोलार भने वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र काठमाडौं र लक्ष्मी प्रतिष्ठान नामक संस्थाको सक्रियतामा जोडिएको हो ।
सेवा क्षेत्र अन्तर्गत ८५ घर रहेकोमा अझै ३५ घरमा सोलार जडान गर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष सिलवालले बताए । प्रतिष्ठानकै सक्रियता र फाउन्डेसनको समन्वयमा ८५ वटा घरहरु नयाँ बन्दै छन् । स्थानीय युवालाई केही महिनाको सिकर्मी र डकर्मी तालिमपछि स्वरोजगार सृजना गरी धमाधम नयाँ घर बनाउन थालिएको छ ।
हालसम्म कुल १० वटा नयाँ घर बनिसकेको छन् । केही बन्दै छन् । त्यस्तै फाउन्डेसनकै अगुवाइमा यसअघि नै यस क्षेत्रमा शिक्षाको विकासका लागि स्थानीय कान्देश्वरी राप्राविको भवन पुनःनिर्माणको काम भएको थियो । हाल यस क्षेत्रका २५ बालबालिका रत्ननगर र काठमाडौंमा विभिन्न तहमा अध्ययनरत छन् । ३ जना युवाले भक्तपुरमा एक वर्षको आवासीय सुविधासहित प्राविधिक तालिम लिइरहेको अध्यक्ष सिलवालले बताए ।
[divider]घर छाउनका लागि जस्ता बोकेर जाँदै कान्दाका एक चेपाङ ।